Isivivinyo sokumelana nomlilo - iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ukuhlolwa kokumelana nomlilo okunye okubizwa ngokuthi yi-flame retardant test kuyasetshenziswa ukuqinisekisa ukuphepha komlilo kwemikhiqizo noma izinto zethu kanye nokukala izidingo zabo zokuphendula umlilo. Kuyadingeka ukuthi senze lolu vivinyo ukuhlola ukumelana nomlilo, ikakhulukazi imikhiqizo edinga ukusetshenziswa ezindaweni ezimbi kakhulu.
Isixhumi sokubhoboza i-Insulation (IPC)
Ukuhlolwa kokumelana nomlilo kusetshenziswa isithando somlilo mpo ngokusho kwe-IEC 60332-1, ejwayelekile ye-IEC 60332-3. Imishini yokuhlola yenziwe ngaphambili ngokuzenzakalela, engagwema amaphutha abantu ukuqinisekisa ubuqiniso nokunemba kokuhlolwa.
Sisebenzisa ukuhlolwa kwamazinga okulandelayo emikhiqizweni emisha ngaphambi kokuqalisa, nokulawulwa kwekhwalithi yansuku zonke, ukuze siqiniseke ukuthi ikhasimende lethu lingathola imikhiqizo ehlangabezana nezidingo zekhwalithi.